HTC သည် One X9 ကို ၅.၅ လက်မ၊ ၁၀၈၀p မျက်နှာပြင်၊ သတ္တုကိုယ်ထည်နှင့် 5,5MP ကင်မရာ OIS ဖြင့်ကြေညာခဲ့သည်
PowerVR G6200 GPU ကို
dual SIM ကဒ်
အရွယ်အစား: 153,9 x 75,9 x ကို 7,99 မီလီမီတာ
El HTC One X9 နှစ်ခုအရောင်များအတွက်လာလိမ့်မယ်, gris metal y plata, y su precio se aproximaalos 370 dólares al cambio para estar dentro de poco disponible en China. En definitiva, es un interesante terminal de gama media que inaugura esta serie X en HTCala que se espera que lleve por la senda del éxito y la consiga recuperar un poco esa mala publicidad adquirida en el tiempo por esos dispositivos que se quedaronalas puertas de la victoria.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC သည် One X9 ကို ၅.၅ လက်မ၊ ၁၀၈၀p မျက်နှာပြင်၊ သတ္တုကိုယ်ထည်နှင့် 5,5MP ကင်မရာ OIS ဖြင့်ကြေညာခဲ့သည်
Android Marshmallow နှင့် Lollipop စက်ပစ္စည်းများရှိ Battery Statistics ကိုလျင်မြန်စွာဘယ်လိုသုံးမလဲ